Horudhac: Deportivo Alaves vs Barcelona… (Barca oo doonaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka La Liga) – Gool FM
(Alaves) 31 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa indhaha ku haysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka La Liga, marka ay caawa oo Sabti ah u safrayaan Estadio de Mendizorroza, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan Alaves.
Tababare Ronald Koeman kooxda uu hoggaamiyo ayaa la dhibtoonaysa guuldarradii 3-1 ee ka soo gaartay Real Madrid kulankii El Clasico ee todobaadkii hore, waxaana ay haatan fadhiyaan kaalinta 12-aad ee kala sarreynta horyaalka La Liga.
Dhinaca kale Kooxda Alaves ayaa ku jirta booska 15-aad ee horyaalka iyadoo leh todoba dhibcood, kaddib todoba kulan oo ay ciyaartay horyaalka xilli ciyaareedkan.
Rodrigo Ely oo dhaawacan ayaa ah xiddiga kaliya ee dhaawac cusub uga maqnaanaya Alaves kulankan, Macallin Pablo Machin ayaana la filayaa inuu ilaaliyo xulashadiisa.
Pere Pons kaasoo dhaawac ka qaba suulka lugta ayaa la saadaalinayaa inuu ka soo laaban doono bartamaha December, taasoo la micno ah in Tomas Pina iyo Lucas Battaglia ay noqdaan xulashada koowaad ee khadka dhexe ilaa waqtigaas.
Ruben Duarte waa uu sii wadan doonaa ka ciyaarista garabka bidix ee daafaca, iyadoo Luis Rioja uu fadhiyo kursiga keydka.
Gerard Pique ayaa dib ugu soo laaban doono daafaca dhexe ee kooxda martida ah kaddib markii uu ganaax ku seegay kulankii bartamihii todobaadkan ay guusha ka soo gaartay kooxdiisa Barcelona naadiga Juventus.
Sergino Dest ayaa sidoo kale dhanka kale loo weecin doonaa kaddib markii laga doorbiday Sergi Roberto garabka midig ee daafaca bartamihii todobaadkan.
Ousmane Dembele ayaa ku soo bilaaban kara kulammadiisii ugu horeeyay ee xiriir ah kooxda Barca kaddib qaab ciyaareed aad u fiican oo uu soo bandhigay kulankii dhowaa ee Juventus.
>- Kooxda Barcelona ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay naadiga Deportivo Alaves tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa guuleysatay siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Deportivo Alaves tartammada oo dhan.
>- Deportivo Alaves ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso todobo ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Deportivo Alaves dhammaan tartammada.